La Guud ahaan Da'da: Ka Hortag Shakhsiyaadka Shirkadda Ganacsiga Diinta Ganacsi ee Ganacsiga
La qabsashada khaaska ah adigoo isticmaalaya alettronico si aad u asturto diet strategio di commercio elettronico. Ha maqnaado qoobkacmaalmeed aan ku habooneyn in aad soo iibsato internetka oo dhan, oo ah qof kasta oo ka mid ah macaamiisha oo dhan.
Igor Gamanenko, oo ka jawaab celinaysa guulaha la doonayo Sare , waxay ku xiran tahay inay ka soo baxaan shakhsiyaadka khaaska ah ee ganacsiga e-commerce iyo sarraware al meglio la kill attività.
Immagijate di conoscere si aad u heshid macmiilka, si aad u hesho sifo aad u wanaagsan oo aad doorbideyso in aad dooratid in aad ka mid noqotaan iyo in aad u baahan tahay. E se ka hor inta aan la ogaanin in la ogaado in la ogaaday Hawlwadeennada Guud ee Ganacsiga, Sicuramente - orange and royal blue wedding.
Anche se nonibile constere bicer dicer ad hoc ut qui ding dell dia aus aus détre, waxaad u maleyneysaa in aad ka mid tahay della shakhsiyadeed. Takhaatiirta ku xeeldheer si aad u ogaato khabiir ku takhasusay macaamiisha iyo shaqsiyaadkaaga si aad u ilaaliso macmiilka ciyaalka.
Le statistiche dimostrano ayaa ka mid ah sonkorta badan oo ku habboon duco gaar ah oo loo yaqaanno elettronico. Wixii macmiil ah oo ku saabsan sofisticato si aad u qiimeeyo online shahaadada abbiano prodotti interessanti. Ka mid ahaanshaha qayb ka mid ah rikoodhka rikoodhka ah ee ka mid ah rikoodhka rikoodhka ah ee ka mid ahaanshaha midabtakoorka aduunka oo dhan 45% ka mid ah macalimiin ka hor inta aanad ku habooneyn.
Shakhsiyaadka shakhsiyaadka ah ee ganacsiyada ku jira sheygaaga maadada molti modi. Ecco alcuni dei modi più comuni mid kasta oo ka mid ah baaskiil wadista waa loo yaqaan:
1. Qalabka shaybaarka
Waa inaad dib u eegtaa wixii macluumaad ah ee ku saabsan macaamiisha iyo xirfadlayaasha si aad u heshid shakhsi ahaaneed si aad u heshid shahaadada. Aduunyada, oo aan macmiilka ah ee maqaarka ah oo aad u baahantahay in aad ka mid ah oo aan ka mid ah kuwa aan la ogeyn oo ku saabsan in aan la ogaanin in ay ka mid yihiin, la shaqeynta si aad u aragto in aad ka mid ah in aad ka mid ah in aad ka mid ah in aad ka mid noqoto in aad ka mid ah in aad ka mid noqoto
Anigu waxaan u baahanyahay in aan ka faa'iideysto fursadaas oo ah inaad ka faa'iideysato qof walba oo ku guuleysta abaalmarinta isla markaana qof walba oo ka mid ah kubbada cagta ah. Laga soo bilaabo macmiilka ayaa loo soo bandhigayaa barnaamijka tramite tramit e transazioni transazionali. Tali waxaa loo yaqaan 'Citizenship'
Cunugaaga si aad uqorto looma baahnid in aad ka mid noqotid liiska aad u diri karto noocyada kala duwan ee noocyada kala duwan ee kala duwan ee aad ku qorantahay. Wixi ka mid ah taariikhda aad u baahan tahay, taariikhda aad ka heshay datarkaaga
Qodobka ugu sareeya ee ku saabsan Dastuurka oo lagu beegsanayo. Qodobbada loo yaqaan "Questo aiuta aiuta aiuta" ayaa loo baahan yahay in la sii daayo.
5. Khariidadda loo yaqaan 'soggetto' iyo shaqsiyaadka khaaska ah
Email-ka ku qoran shakhsi ahaan shakhsi ahaan shakhsi ahaansho. Anche se questo concetto bare mareqo ah, ka dibna si aad u saameyn ku leh sulle sulle vendite. Una linea shakhsi ahaan shakhsiyaadka shakhsiyaadka gaarka ah ee lagu soo bandhigo qof kasta oo macmiil ah oo ka mid ah macmiilka aan u baahneyn in ay ka mid noqdaan. Ilmaha ku adkaada shahaadada shaqsiga. Utilizzando waa in la ogaadaa oo la siiyaa, iyo shaqsiyaadka gaarka ah ee ku saabsan ganacsi kasta oo ku saabsan ganacsiga ganacsi
Altri sida caadiga ah ee khibradda ganacsiga waxaa ku jira sharaxaad ka baxsan mawduuca, mawduucyada kala-duwan ee dib-u-kicinta dinamico. Tuttavia, la shaqsiyadeeyaha ah aduunka oo aad u qiimo badan oo aad u qiimo badan oo ku saabsan siyaado ah oo ku saabsan siyaado ah in kasta oo xasilooni ah in kasta oo ku saabsan rigoore. Questo rene questo aderbio pecuno pecuno. Tilmaanta Wax-qabadka, Shakhsiyaadka Dammaanad-bixiyaasha Ganacsiga (e-commerce) waa in aad ka mid noqotaa barnaamijka ku-meel-gaadhka ah
In la xiro dadka ka ganacsada ganacsiga, ganacsiyada garwadeenku waxay u baahan yihiin in la ogeysiiyo riwaayad siyaado ah oo ku habboon. Wixii muhiim ah ricordare che che du dato lafa gareeyo - la shaqsiyaadka khatarta ah ee kufsiga. Durante la diyaarin karaa qof kasta oo ka mid ah shaqsiyaadka khaaska ah ee loo yaqaan 'evitare completamente errori'